I-Jupiter kanye ne-Super Storm yayo! UJuno usiletha kuleli sonto, izithombe namavidiyo amahle kakhulu kuze kube manje! | Isimo Sezulu Senethiwekhi
I-Jupiter kanye ne-Super Storm yayo! UJuno usiletha kuleli sonto, izithombe namavidiyo amahle kakhulu kuze kube manje!
Isithombe esithathwe yi-Juno probe ku-9866km
Kuleli sonto isiphenyo sakwaJuno sithathe izithombe ezimbalwa zesiphepho esibomvu sikaJupiter. Ukulungiswa okuphezulu, kuthathwe izithombe eziseduze neziseduze ze- Isiphepho esingu-16.350km. Ububanzi bayo buphinda izikhathi eziyi-1,3 kunobo boMhlaba. Kulinganiselwa ukuthi ineminyaka engaba ngu-150 ubudala, yize kungenzeka ukuthi kuzolandela amakhulu ambalwa eminyaka. Futhi kwenzeka ukuthi yize kwagcinwa okokuqala ngo-1830, ekuqaleni kuka-1600 kwaqashelwa indawo encane ebomvu eJupiter. Lokhu kulandela ukuthi kungafana.
Isithombe silayishwe yi-NASA kulo Julayi 12 odlule
Sus U-640km / h imimoya ijikisa i-anticyclonic, okungukuthi, ngokungafani neziphepho eziningi. Futhi kuyancipha. Ngemuva kweminyaka yokubukwa, kuyabukwa ukuthi ubukhulu bayo buncipha kanjani kancane kancane. Ngalesi sikhathi azikho izithombe ezingakaze zithathwe ngaphambili zesiphepho sakhe. Uphenyo lukaJuno, luhamba ngebanga elingu-50km ngomzuzwana, futhi lokho Ikhishwe ngo-Agasti 5, 2011, isinikeza lezi zithombe namavidiyo esiphepho, okuyinto iminyaka eminingi kangaka izazi zezinkanyezi eziye zathi.
1 Okungaziwa ngesiphepho
2 Indlela ende yokuhamba
3 Iplanethi enkulu kunazo zonke kuSolar System, kufakwe ividiyo
Imibala yayo ebomvu iseyimpicabadala. Ngokuya ngocwaningo olwenziwe, amafu asemkhathini ongaphezulu kungenzeka ukuthi aqukethe i-hydrogen sulfide, i-ammonia, namanzi. Okungacaci ukuthi ngabe lezi zinhlanganisela zisabela kanjani ekugcineni ziwunike lo mbala.
Okunye okungaziwa. Kungani isiphepho singakhathali, futhi siqhubeke nokushaya ngokungaphezi ngemuva kwamakhulu eminyaka? Ososayensi abaningi bakholelwa ukuthi imbangela ingangena ijule, ezimpandeni zesiphepho. Kungakho kubalulekile ukuthi wazi okungaphansi. Uphenyo lukaJuno luhlelelwe indlela yalo elandelayo ngoSepthemba 1.
Ividiyo elandelayo esheshisiwe isibonisa ubuso beJupiter obuthathwe yiphenyo likaJuno.
Izithombe ezilayishwe kuwebhusayithi ye-NASA zikhululekile kwizakhamizi ezifuna ukuzihlela nokuzithuthukisa. Eziningi zazo empeleni ziphethwe ososayensi bezakhamizi abazithuthukisile izithombe ezivela kuwebhu yeJunoCam.
Indlela ende yokuhamba
Uphenyo lukaJuno, oluzobe seluneminyaka engu-6 selokhu lwethulwa, luphethe ukuphenya ngalesi siphepho esikhulu. Inama-sensors ukuthola amandla kazibuthe, nokuthola ukwakheka komoya weJupiter. INASA inethemba lokuqonda ukuthi leli "bala" lisebenza kanjani, bese wembula imibuzo engaphendulwanga.
UScott Bolton, Umphenyi Oyinhloko Uphenyo lukaJuno eSouthWest Research Institute eSan Antonio, eTexas, lwabika: “Manje sesinezithombe ezinhle kakhulu zalesi siphepho esidumile. Kuzosithatha isikhashana ukuhlaziya imininingwane, hhayi nje evela kuJunoCam, kepha kusuka kuzinsimbi eziyisishiyagalombili zesayensi, ukukhanyisa okusha ngokwedlule, njengamanje nangekusasa leRed Spot.
Iplanethi enkulu kunazo zonke kuSolar System, kufakwe ividiyo
Uma okuthile kuhlukaniswa iJupiterKungenxa yokuthi yiplanethi enkulu kunazo zonke kulo lonke uhlelo lweSolar. Nge ububanzi obucishe bube yi-140.000km, cishe izikhathi eziyi-11 zoMhlaba, Ibuye ibe nezinsuku ezimbalwa (isikhathi sokujikeleza) cishe ngo-10 ekuseni, ngo-9: 56 ekuseni ukuba ngibe ngqo. Njengoba yakhiwe kakhulu ngegesi, futhi ijikeleza ngejubane elikhulu kangako, ayiyenzi ibe yindilinga ngokuphelele, kodwa ithambeke.
Uma kwenzeka noma ngubani engacabangi ubukhulu bayo, isithombe esilandelayo sisiza ukuqhathanisa.
Ezinye izithombe esinikezwe zona zivela kuwebhu
Ebizwa ngokuthi "ubuso bukaJupiter"
Futhi elandelayo, ngokuningiliziwe, amafu kaJupiter. Okumangalisayo.
Kule vidiyo elandelayo, siyaboniswa indlela uJuno ayilandelayo lapho eseduze kakhulu esebenzisa amandla kazibuthe kaJupiter. Isizathu sokuthi ihlale ingasondeli ngaso sonke isikhathi yingoba ayithintwa yimisebe, yize uJuno ethola ukuthi ibiphindwe izikhathi eziyishumi kunokulindelekile. Kungakho in iphuzu layo eliseduzane lidlula cishe ama-8.000km futhi esikhundleni salokho iphuzu lalo liqhele kakhulu kude.
Lapho uJuno ephinda edlula ngaseJupiter ezobika izithombe zabo ezinhle nokutholakele, kusuka ku-Meteorology on the Net sizobe sinakile ukuyisakaza kuwo wonke umuntu.
Hlala ubukele, ngoba uma ukuthandile, ukuvakasha okulandelayo kwesithembiso sophenyo!
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » I-Jupiter kanye ne-Super Storm yayo! UJuno usiletha kuleli sonto, izithombe namavidiyo amahle kakhulu kuze kube manje!